IMintigo: Ukuqikelela ukuKhokela amanqaku kwiShishini | Martech Zone
IMintigo: Inqaku lokukhokela lokujonga kwangaphambili kwiShishini
NgoLwesithathu, Novemba 19, 2014 NgoLwesithathu, Agasti 26, 2015 Douglas Karr
Njengabathengisi be-B2B, sonke siyazi ukuba nenkqubo yokufumana amanqaku ekhokelela ekulungiseleleni ukuthengisa okulungeleyo okanye abathengi abanokubakho kubalulekile ekuqhubeni iinkqubo zokuvelisa iimfuno kunye nokugcina ulungelelwaniso lwentengiso kunye nentengiso. Kodwa ukuphumeza inkqubo yokukhangela amanqaku esebenza ngokulula kulula ukuyithetha kunokuba uyenzile. Kunye IMintigo, ngoku unokuba neemodeli zokufumana amanqaku ezikhokelela kumandla okuqikelela kubahlalutyi kunye nedatha enkulu yokukunceda ufumane abathengi bakho ngokukhawuleza. Akusekho ukuqikelela.
IMintigo ibingumqhubi wendlela entsha ngokupheleleyo kwimizamo yethu yokukhokelela kwisizukulwana. UHeather Adams, uMphathi weNtengiso kwiNetFactor
Inqaku leMintigo eliQikelelweyo lokuKhokela lenza ukuba abathengisi beshishini bongeze amandla wentengiso yokuxela kwangaphambili kumanqaku akho akhokelayo.
Isebenza njani iMintigo yokuQikelela ukuKhangela ukuKhangela
IMintigo iqala ngento oyaziyo, usebenzisa iCRM yakho kunye nedatha yokuthengisa oomatshini.
Mhlawumbi uyazi izinto ezithile malunga nezikhokelo zakho: Ngawaphi amaphulo abawabonileyo, apho bacofa khona kwaye bazalisa ntoni kwifom yakho. Sisebenzisa le datha ibalulekileyo ukuqala ukwakha imodeli yakho yokuqikelela.
IMintigo Wongeza oko bakwaziyo, ukongeza amawaka ezibonakaliso zentengiso kwi-Intanethi. IMintigo iqokelela kwaye ihlaziya ngokuqhubekayo amawaka eedatha kwizigidi zeenkampani. Olu lwazi lubandakanya ulwazi loluntu kwezemali, abasebenzi, ukuqesha, itekhnoloji, ukuthengisa kunye neendlela zokuthengisa kunye nohlalutyo lwesemantic yenkampani yedijithali. Iziphumo-iprofayili ye-360-degree yesikhokelo ngasinye kwisiseko sakho sedatha.
IMintigo kusebenza ukuqikelela kubahlalutyi, ukuqokelela idatha enkulu ngokufunda ngomatshini ukuqhekeza iCustomerDNA ™. IMintigo ithatha idatha yakho, idatha yethu, kunye nexabiso lakho elikhokelayo kwaye isebenzisa ukufundwa komatshini ukufumana iCustomerDNA ™ yakho, iseti yezalathi ezenza ukuba zikhetheke ngokuthelekiswa nazo zonke ezinye izikhokelo kwindawo yogcino lwedatha. Isiphumo siseti yezalathi kunye nemodeli yokufumana amanqaku enokuqikelela amathuba okuguqula.
IMintigo amanqaku ekhokelela kwiziko ledatha yakho, echonga ezona zikhokelo zibalulekileyo. IMintigo isebenzisa imodeli yakho yokufumana amanqaku kwangaphambili ukufumana amanqaku akho akhokelayo kunye nazo zonke izikhokelo ezingena kwifaneli yakho kwiinkqubo zakho zokuThengisa kunye neeNtengiso ezinje ngeEloqua, iMarketo kunye ne-Salesforce.com. Oku kunefuthe ngqo kwingeniso yakho-Ngoku uyazi ukuba yintoni ekhokelela ekuthumeleni ngqo kwiNtengiso kwaye yeyiphi ekufuneka uyigcine.
IMintigo idityaniswa ngokwendalo kunye neLifu lokuThengisa le-Oracle
IMintigo inceda abathengisi bafumane abathengi ngokukhawuleza basebenzise ukuqikelela kubahlalutyi. Ungabeka ngokubaluleka phambili umthamo omkhulu wezikhokelo kwaye wenze imikhankaso ebhalwe igama ngesandla esigcwele ngonqakrazo.
Khawufane ucinge ukuba ugqibile ukuyila kwakhona iifom zakho kunye namaphepha okufika. Yonke into ijongeka intle ekuqalisweni kwewebhusayithi yakho entsha kwaye iqela lakho lentengiso liyavuya. Ngale mikhankaso uyenzileyo, uyakuvelisa isikhokelo ngaphandle kwexesha. I-Eloqua yenza le nkqubo ibe lula. Ngoku, yintoni elandelayo elandelayo?
￼￼IMintigo iphuhlise indibaniselwano eyodwa isebenzisa uEloqua entsha Iqonga leNtengiso ye-Oracle AppCloud, ukuzisa ukuThengisa kwangaphambili kwi-Eloqua okokuqala ngokukuvumela ukuba wenze izigqibo zedatha ngoko nangoko.
IMintigo inyusa amandla edatha enkulu kunye nokuqikelela kubahlalutyi ngenjongo yokunyusa ukuthengisa kwakho. IMintigo ikwenza ukuba wakhe iimodeli zokufumana amanqaku kwangaphambili kwintengiso nganye ekujoliswe kuyo. Kwimodeli nganye yokuqikelela, iMintigo iqokelela idatha yakho yembali ukuze yakhe eyona modeli yomeleleyo.
Ngamanqaku okuqikelela kaMintigo kunye nezalathi ungaqinisekisa ukuba ujolise kunxibelelwano olululo, ekuvumela ukuba ufumane abathengi ngokukhawuleza.
Ngoku ngokudityaniswa kwe-Oracle yeNtengiso ye-AppCloud entsha kaMintigo, nanini na xa ufuna ukwenza isigqibo sokuqikelela, tsala nje ibhloko yesenzo sikaMintigo kwi-Campaign Canvas. Lungiselela ngokulula isenzo seMintigo ukufumana amanqaku akho angenayo ngokuchasene nemodeli elungileyo kwaye uya kufumana kwangoko amanqaku aqikelelweyo e-Eloqua wakube uqhuba iphulo. Ngaphezulu kwelo, iMintigo iya kutyhala naziphi na izikhombisi zentengiso ozikhethayo kwi-Eloqua, ivumela ukwahlulwa kobunkunkqele kunye nolwazi oluthe kratya lokuthengisa kwakhona.
IMintigo iya kuba ngumlawuli wezithuthi zomoya kwi-Eloqua yokuthengisa ngokuzenzekelayo. Okokuqala, unokuqinisekisa ukuba abafowunelwa amanqaku aphezulu bathathe uloliwe we-bullet kwaye bafumane indlela eya kwiqela lakho lokuthengisa ngokukhawuleza. Okwesibini, unokulungelelanisa amaphulo akho kunye nokondla amathrekhi ukuze uhlangane nabaphulaphuli bakho ngokusekwe kwizikhombisi zentengiso zikaMintigo.
Nge-Eloqua kunye neMintigo ungaqinisekisa ukuba uthatha eyona ndlela ifanelekileyo kulowo nalowo uqhagamshelana naye ngokuphucula umyalezo wakho kunye neziphumo zomgca osezantsi.
tags: crm ukukhangela amanqakueloquaishishini elikhokelela ekufumaneni amanqakuHeather adamsLinkedInuphawumintigoumnathaOracleIntengiso yeOracle AppCloudilifu lokuthengisauqikelelo lwamanqaku ekhokeloukuthengisasalesforce.com